အမေ့ရွာလေး က ရွာဦးစေတီ မှာ ဘုရားရင်ပြင်တော် ခင်းဖို့ လှူဒါ န်း ပေးခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံ – Let Pan Daily
ဟာသအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သူ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံ ကတော့ ဒီနေ့မှာ အဘိုး၊အ ဘွား နဲ့ မိခင်ဖြစ်သူအတွက် ရည်စူးပြီးအလှူလေးတစ်ခု ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြောင်းကို မျှဝေခဲ့ပါ တယ်။ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံရဲ့ မိခင်ကြီးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ဆုံးပါးသွားခဲ့ပြီး ကိုဗစ် ကာလလည်း ဖြစ်တာကြောင့် လူအနည်းငယ်နဲ့ သာ မိခင်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကို လိုက်ပါပို့ ဆောင် ပေးခဲ့ရပါတယ်။
ကွန်လွန်သူမိခင်ကြီးအတွက် နာရေးကူညီမှုအသင်းမှာ (၅)သိန်း လှူဒါန်းပေးခဲ့ပြီး ရွှေ ကျင်bကျောင်းတိုက်ဆွမ်းစားဆောင်အတွက်လည်း (၁)သိန်းလှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ လည်း မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ မွေးရပ်မြေရွာလေးမှာကွယ်လွန်သူဘိုးဘိုး၊bဘွားbဘွား နှင့်..မေမေ ဒေါ်ယဉ်သန်း(ခ)မလေးပလောင်တို့အားရည်စူးပြီးတော့ .မေမေ့ရဲ့.ရွာလေးရှိ.
.ဘိုးဘိုး၊ဘွားဘွား (၇)ရက်သားသမီးများတည်ခဲ့သော..ရွာဦးစေတီလေး အတွက်…ဘုရားရ င်ပြင်တော်ခင်းရန်…ဘိလပ်မြေအိတ်(၅၀)…ကျောက်ပြား(၂၀၅၀)ချပ်.. .နေပူခံကျောက်ပြား (၃၃၀)ချပ်. .ကျောက်စရစ်ခဲ(၃)ကျင်းကို အရောက်ပို့ဆောင်ပြီး လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ တစ်လပြည့်ဆွမ်းကျွေးလေးကိုလည်း မေမေ့ရွာလေး မှာပဲ သံဃာ တော်(၁၁)ပါးအား ဆွမ်းကပ်ရေစက်ချလှူဒါန်းပါမယ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ.. မိခင်ဖြစ်သူအ တွက် ဆက်တိုက်လှူဒါန်းပေးနေတဲ့ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံကတော့ သူ့ရဲ့ အလှူလေးတွေကို မေမေကောင်းရာမွန်ရာဘဝ ကနေ ကြည့်ပြီး ကြည်နူးပီတိနဲ့ သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းခဲ့ပါသေးတယ်။
ပုရိသတှေ အံ့သွသှားစမေဲ့ အလနျးစား ဖကျရှငျလေး နဲ့ မမဆောငျးရဲ့ ပုံလေးမြား
မြင်သူတိုင်း လည်ပြန်ငေးမော ရလောက်အောင် မြန်မာဆန်ဆန်လေး နဲ့ ကြွေချင်စရာ ကောင်းလွန်းနေတဲ့ မအေးသောင်း ရဲ့ Tik Tok Video လေး